Wawa njengekhaya kufutshane neBayreuth
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguJenny
Silusapho oluthandekayo, olunesiphithiphithi kancinci (umama, utata, abantwana ababini abazelwe ngo-2016 nango-2018, iikati ezimbini, izinja ezimbini, iinkukhu ezintlanu) abathanda ikhaya labo kwaye bathanda nokuhamba. Sifuna ukwabelana nawe ngezo zinto kwaye sijonge phambili ekudibaneni nawe.
Uya kulala kwigumbi elihle nelitofotofo kumgangatho ophambili wekhaya lethu elithandekayo. Wamkelekile kakhulu ukuba ukonwabele ukuhlwa kwakho (okanye imini) kwigumbi lethu lokuhlala ngaphandle kwigadi yethu ethandekayo. Qwalasela kuphela ukuba ebusuku abantwana bethu abancinci / iintsana ziya kulala (ngethemba) ke gcina nje ilizwi lakho liphantsi kancinci. Sikwahlonipha iimfuno zakho naphi na apho sinakho.
Nceda uqaphele ukuba ngoko ikhitshi, indawo yokuhlala- kunye negumbi lokutyela kunye namagumbi okuhlambela ayabelana. Ngubani ongazifuniyo iithoyi ezileleyo okanye ongakwaziyo ukuba ne-cookie enye okanye enye elele nceda ungabhuki igumbi lethu. Ukude noko sijonge phambili kwisicelo sakho okanye ukubhukisha kwaye siyakuvuyela ukukwamkela kwiparadesi yethu encinci.
1 ibhedi elala abantu ababini, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Ewe ndizakubakhona ukuze ndibe nexesha lakho kodwa ndiyakwamkela ukuba ufuna ukuba nexesha labucala. Kwakhona ndiza kufuna ixesha labantwana bam kunye nendlu;)